किन महान् कर्मचारीहरू छोडछन्? किन ठूला कम्पनिहरु अझै भर्ती गर्नु पर्छ? | Martech Zone
शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० बुधबार, अक्टोबर 29, 2014 Douglas Karr
पछिल्लो दशकमा, मैले धेरै कम्पनीहरूमा काम गर्ने खुशी पाएँ। कम्पनी जुन म अधिक मापन गर्दछ ल्याण्डमार्क संचार हो। ल्यान्डमार्कमा कर्पोरेट स्टाफले कामदारहरूलाई उनीहरूको जति बढी वा थोरै उनीहरूले आफूले चाहे जति विकास गर्न सक्षम बनाए। कम्पनीले लगानीको डर बिना त्यसो गर्‍यो कि तिनीहरूले काम गर्नेहरू गुमाउने छन्। कम्पनीका नेताहरूले सोचे कि यो उनीहरूको विकास र तिनीहरूलाई छोड्नु भन्दा उनीहरूको कर्मचारिको विकास नहुनु जोखिमको कुरा हो।
मैले त्यहाँ काम गरेको Department बर्षमा उत्पादन विभाग भित्र नतिजा अविश्वसनीय थिए। केही कम्पनीले संघर्ष गरिरहेको बेला, हाम्रो विभागले लागत कटौती गर्‍यो, ज्याला बढ्यो, उत्पादकत्वमा सुधार ल्यायो, र त्यहाँ काम गरेको हरेक वर्ष फोहोर घटायो। मैले अर्को ठूलो मिडिया कम्पनीको लागि काम गरें जुन विश्वास गर्दछन वा पेशेवर विकासलाई पुरस्कृत गर्दैन। कम्पनी अहिले शमबलमा छ, कर्मचारीहरू बाँया र दायाँ छोडेको साथ। मैले केही युवा कम्पनीहरूको लागि पनि ठूलो विकास र सम्भाव्यताका साथ काम गरें।
मैले धेरै वर्षमा गरेको अवलोकन भनेको ठूलो कर्मचारहरूको सामग्री राख्नु र आवश्यक परेको बेला नयाँ ट्यालेन्ट ल्याउने गाह्रो चुनौती हो। Gaps समयका साथ महान कर्मचारिहरु को कौशलता मा विकसित हुन्छ, कम्पनी को चाहिन्छ कौशल, र औसत कर्मचारी को कौशलता।
तल चित्र को चित्रण यो मेरो चित्रण को तरीका हो। ठूला कर्मचारीहरू प्राय: कम्पनीको गतिमा विकास हुन्छन् र त्यसपछि उनीहरूले कम्पनीलाई अगाडि बढाउन थाल्छन्। यसले कर्मचारीको आवश्यकतामा कम्पनीले प्रदान गर्न सक्ने खाई (A) लाई ल्याउँछ। प्रायः यसले कर्मचारीलाई निर्णयमा पुर्‍याउँछ, "के म बस्नु पर्छ वा जानु पर्छ?" यसले कम्पनीलाई भर्नका लागि खाली छोड्छ, र ठूलो घाटा। याद गर्नुहोस्, यी कम्पनीका सुपरस्टारहरू हुन्।
तर त्यहाँ अर्को अन्तर (बी) को रूपमा छ, औसत कर्मचारीले आपूर्ति गर्न सक्नेको विरूद्ध कम्पनीको आवश्यकताहरू। सफल बृद्धि भएका कम्पनीहरूले प्राय: आफ्ना कर्मचारीहरूका सीप सेटहरू बाहिर पेस गर्दछन्। एक ठूलो कम्पनी सुरू गर्न आवश्यक थियो जो कर्मचारीहरू प्रायः ती वृद्धिलाई कायम राख्न वा यसलाई विविधीकरण गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू हुँदैनन्। नतिजा स्वरूप, प्रतिभामा एक अन्तर छ। महान कर्मचारीहरूको प्रस्थानको साथ संयुक्त, यसले प्रतिभामा ठूलो घाटा निम्त्याउन सक्छ।
यही कारणले कम्पनीहरूले जोखिम लिनु पर्दछ विकासशील कर्मचारीहरूलाई जारी राख्न जो यसलाई खुला रहन्छ, साथै राम्रो कर्मचारीहरू भर्ती गर्न सक्दछ। ती खाली ठाउँहरू भर्नु पर्छ। औसत कर्मचारीहरूले यो गर्न सक्दैनन्। कम्पनी सबै तहमा प्रतिभाका लागि कतै कतै हेर्नु पर्छ यसको फलस्वरूप यसले असन्तुष्टि ल्याउँदछ। औसत कर्मचारीहरूले राम्रो कामदारहरूको नियुक्ति नाराज।
यो केवल एक सिद्धान्त हो, तर म विश्वास गर्दछु कि लामो समयसम्म मानिसहरूले एक अर्कासँग मिलेर काम गर्छन्, औसत प्रबन्धकले उनीहरूको सामर्थ्यभन्दा कम कर्मचारीहरूको कमजोरीमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। ठूला कर्मचारीले पनि उनीहरुलाई माइक्रोस्कोप मुनि पाउन को लागी सीपहरु को लागी, तिनिहरु भन्छन्, सुधार आवश्यक छ। एउटा कम्पनीले गर्न सक्ने सबैभन्दा खराब गल्ती भनेको प्रतिभा भर्ती गर्नु हो जब उनीहरूसँग अनजाने महान महान् प्रतिभा हुन्छ। एक महान कर्मचारीहरु को कमजोरीहरु मा ध्यान केन्द्रित निश्चित रूप मा उनीहरुलाई रहनु वा जाने निर्णय गर्नु व्यक्तिगत निर्णय मा सहयोग गर्दछ।
त्यसो भए, एक महान नेता को जिम्मेवारी अविश्वसनीय गाह्रो छ, तर प्रबंधनीय। तपाईंले कर्मचारीको क्षमतामा ध्यान दिनै पर्छ, कमजोरीहरू होइन, वास्तवमा एक कर्मचारीमा सम्भाव्यता नाप्न। तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंले इनाम र महान कर्मचारीहरूलाई बढावा दिनुहुन्छ। तपाईले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईले संगठनमा ठूलो प्रतिभा भर्नुहुन्छ खाली ठाउँहरू भर्नका लागि। तपाईंले ठूलो कर्मचारीहरूको विकासमा जोखिम लिनुपर्दछ - जे भए पनि तपाईंले तिनीहरूलाई हराउनुहुनेछ। वैकल्पिक त्यो हो कि तपाइँ पक्का हुनुहुन्छ कि तिनीहरू जान्छन्।
यो एक अविश्वसनीय संगठन र अविश्वसनीय नेता हो जसले सावधानीपूर्वक यी अंतरहरूलाई सन्तुलन गर्न र उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रबन्ध गर्न सक्दछ। मैले यो कहिले राम्रोसँग गरेको देखेको छैन, तर मैले यो राम्रोसँग गरेको देखेको छु। म विश्वस्त छु कि यो महान नेताहरूको साथ ठूला संगठनहरूको एक गुण हो।
बिली दि ब्लगि Po कवि
नोभेम्बर,, २०१ at 18::2006 बिहान
म विश्वास गर्दछु कि तपाईले केही ठूलो अवलोकन गर्नुभयो र म जोड्छु कि धेरै कम्पनीहरूमा ठूला कर्मचारीहरू प्रायः फाइदा लिइन्छन् जबकि कम कर्मचारीहरूलाई मात्र स्केट गर्न अनुमति दिइन्छ जुन उनीहरूले विश्वास गरे पछि उनीहरूलाई पूर्णरूपमा असन्तुष्टि दिन्छ। एक महान काम हुन।
उत्कृष्ट लेख! डोभेटेल राम्रोसँग बुद्धिका साथ "सर्वप्रथम नियमहरू तोड्नुहोस्"। राम्रो भयो - धन्यवाद!
जनवरी 13, 2007 मा 1: 56 एएम
पहिलो ब्रेक सबै नियमहरु नेतृत्व मा पक्कै मेरो मनपर्ने पुस्तक हो!